Mofon’aina – ALATSINAINY 10 JOLAY 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALATSINAINY 10 JOLAY 2017
21 Ary tamin’ izany ora izany Jesoa dia nahasitrana olona maro tamin’ ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba maro.22 Dia namaly Izy ka nanao taminy hoe: Mandehana ianareo, ambarao amin’ i Jaona izao hitanareo sy renareo izao; mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara.23 Ary sambatra izay tsy ho tafintohina noho ny Amiko.24 Ary rehefa lasa ny irak’ i Jaona, dia nilaza an’ i Jaona tamin’ ny vahoaka Jesoa ka nanao hoe: Hizaha inona no nalehanareo tany an-efitra? Volotara nohozongozonin’ ny rivotra va? 25 Sa hizaha inona no nalehanareo? Olona mitafy lamba soa va? Indro, ny mitafy lamba soa sy mihinana zava-py dia ao an-tranon’ ny mpanjaka.26 Sa hizaha inona no nalehanareo tany? Mpaminany va? Eny, hoy Izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy.27 Fa izy ilay voasoratra hoe: Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny lalanao eo alohanao.28 Lazaiko aminareo: Amin’ izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona; nefa ny kely indrindra amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra dia lehibe noho izy.29 Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory hetra raha nandre, dia nanamarina an’ Andriamanitra, satria natao batisa tamin’ ny batisan’ i Jaona izy.30 Fa ny Fariseo sy ny mpahay lalàna kosa nandà ny fikasan’ Andriamanitra, satria tsy mba nanatona hataon’ i Jaona batisa izy.
LIOKA 7 :21-30
OLONA TOY INONA NO ANTSOINA HOE : VAVOLOMBELON’NY TOMPO ?
Any an-tranomaizina Jaona mpanao batisa no naniraka ny mpianany hanontany ny momba an’i Jesoa, na Izy tokoa no ilay ho avy, na mbola hafa no andrasana (and 20). Ireo iraka ireo no vavolombelona satria :
1-Olona efa nihaona tamin’i Jesoa
Tsy ho afaka hanao tatitra any amin’i Jaona izay naniraka azy ireo , ary tsy hahay manazava ny momba an’i Jesoa raha tsy efa nihaona taminy . Ny olona izay efa nihaona tamin’i Jesoa ihany no afaka hijoro ho vavolombelona hanambara Azy. Ny vavaka no fomba iray hihaonana sy hiresahana Aminy. Ny olona tsy mahay mivavaka dia tsy azo lazaina ho iraka, ary tsy afaka ny hijoro ho vavaolombelon’ny Tompo.
Rehefa tonga tany amin’i Jesoa ireo dia izao no valiteny azony : « mandehana ianareo… » . Araka izany , ny vavolombelon’ny Tompo dia izay efa nihaona tamin’i Jesoa ka irahiny indray hanambara izay hitany sy reny momba izay rehetra efa nataony. Ny maha-izy azy ny fiangonana dia ny fiantsoana sy ny fanirahana. Izany no hanentanana antsika fiangonana rehetra hanao ho zava-dehibe ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny alalan’ny fanaovana Tafika Masina . Jesoa no maniraka antsika.
3-Manambara izay hitany sy reny
« …ambarao amin’i Jaona izao hitanareo sy renareo izao … » (and 22). Iraka ampanaovin’ny Tompo amintsika fiangonana ny hitory sy hanambara ny asa mahagaga rehetra efa nataon’ny Tompo. Lazao ho ren’ny olona rehetra fa Izy no Mpamonjy izao tontolo izao.
Mofon'aina - ZOMA 07…